Fahatakarana ny antony sy ny antonony ... | Martech Zone
Alarobia, Desambra 5, 2007 Alakamisy, Jona 11, 2009 Douglas Karr
Araka ny Dictionary.com:
Medium: iray amin'ireo fitaovana na fantsom-pifandraisana, fampahalalana, na fialamboly amin'ny ankapobeny eo amin'ny fiaraha-monina, toy ny gazety, radio, na fahita lavitra.
Angamba ny lahasa sarotra indrindra ho an'ny rindrambaiko rehetra amin'ny maha serivisy anao dia ny handresy ireo paradigma an'ny indostria arosonao. Hiresaka manokana momba ny indostrian'ny trano fisakafoanana aho amin'ity ohatra ity, saingy mitovy amin'ny orinasa ecommerce hafa… ny fahazoana ny ataon'ireo mpanjifanao amin'ny Internet vs. amin'ny fivarotana anao, amin'ny telefaoninao, na amin'ny fihaonanao amin'ireo mpiasao dia hanampy anao amin'ny fomba tsara indrindra volavolaina ny interface tsara mba hampiasana ny salantsalany ho an'ny mpanjifa bebe kokoa.
Miaraka amin'ny indostrian'ny trano fisakafoanana, angamba ny paradigma sarotra indrindra dia ny filaharana an-tserasera tsy maintsy manome taratra ireo safidy ao anaty trano fisakafoanana. Tsy marina tsotra izao. Fampitaovana hafa io. Ny fampahalalana izany amin'ny restaurateurs dia mety ho fampiraisana sarotra. Fantatr'izy ireo tsara ny orinasany noho ny olon-drehetra, saingy tsy fantany izany amin'ny Internet.
Orinasa mahavariana ny trano fisakafoanana… ny nahandro, ny fanamiana an'ny mpiasa, ny endrik'ilay trano fisakafoanana… ny antsipiriany rehetra dia manome fampidirana ny traikefa ankapobeny. Ny fivoahana na ny fandefasana dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra niainana tao amin'ny trano fisakafoanana, fa afaka mampatsiahy anao izany izy ireo. Ny fandefasana an-tserasera dia tena tsy mitovy afa-tsy sakafo + mora. Ny fanamorana ny fivoahana na ny fanaterana, ny fahafaha-misakafo ao an-tranonao, ny fanamorana ny fandoavana ny carte de crédit… na dia ny fahafaha-miresaka amin'ny olona avy amin'ny trano fisakafoanana aza.
Raha miasa ny trano fisakafoanana iray hanasarotana ny fisian'izy ireo amin'ny Internet toy ny atiny anatiny, dia mety hisy fiantraikany amin'ny tanjona kendreny izany Nahoana nandeha voalohany tamin'ny Internet ilay mpampiasa. Ny mpanjifanay manafatra an-tserasera dia mitombo amin'ny habeny sy ny sakafony, fa ny ankamaroany dia toeram-pisakafoanana an-tsokosoko (tsy sakafo haingana fa tsy kintana 5). Miharihary fa ireo mpanjifantsika sambatra indrindra dia ireo izay manome safidy faran'izay kely indrindra.
Ny fametrahana lovia fisakafoanana misy safidy 4 tsy maintsy atao, safidy 10 hafa, ary na ny fanoloana aza dia mety hitaratra ny safidinao ao amin'ny trano fisakafoanana - fa hijanona hahalala izany ve ny mpampiasa anao? Heveriko fa tsia. Aleo kosa manome ny takelaka takelaka fantatrao indrindra, ary jereo izay hitranga manaraka.
Mediam-bahoaka ny Internet. Amin'ny mpampita vaovao rehetra dia tsy maintsy fantatrao ny fihetsika ambadiky ny fampiasana an'io medium io. Ny fahafantarana fa ny fitondran-tena sy ny fampiasana an'io fitaovana io dia hitondra fahombiazana.
Tags: Agence Marketing amin'ny mailakaMpanolo-tsaina amin'ny marketing amin'ny mailakatsaho amin'ny InternetMarketing amin'ny mailaka tantananateknolojia marketingNew WebsiteMarketing amin'ny mailaka matihaninasocialnomicsMpanohanahamono ny teknolojia
Dec 6, 2007 ao amin'ny 8: PM PM
Hevitra manaitra ary heveriko fa marina ny anao.
Manana trano fisakafoanana eo an-toerana aho izay manolotra sakafo hisakafoanana ary alao. Azoko atao ny miantso azy ireo na mandefa mailaka azy ireo hamandrihana sy hanafatra sakafo. Mety hisakafo hariva aho rehefa te 'hivoaka alina'. Hesorina aho rehefa mila 'alina' mora. Handefa mailaka amin'izy ireo aho rehefa mikasa fety na hetsika hafa. Tsy hataoko, ohatra, ny mandefa mailaka amin'izy ireo hamandrihana latabatra - be loatra ny fiovaovana ary mora kokoa amin'ny finday izany. Ary ny lafiny iray, mora kokoa ny manafatra sakafo mandritra ny 5 andro amin'ny alàlan'ny mailaka.